တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Windows PC တွေမှာ Android ဖုန်းမျိုးစုံအတွက် Download PC Suites & USB Drivers for Android Smartphones & Tablets (ADB and Fastboot Drivers)
Windows PC တွေမှာ Android ဖုန်းမျိုးစုံအတွက် Download PC Suites & USB Drivers for Android Smartphones & Tablets (ADB and Fastboot Drivers)
Windows Computer နဲ့ Android Phones, Tablets ပိုင်ဆိုင်သူများအတွက် PC Suite တွေ၊ Driver တွေ၊ စုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ရှဲတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ Link တွေမှာနှိပ်ပြီး Down ကြပါ။ မူရင်း Blogger တင်ထားတာကို Copy လုပ်ပြီးပြန်ရှဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Download PC Suite and USB Drivers for HTC Android device.(HTC Sync)
Download PC Suite (HiSuite) and USB Drivers or(Huawei/HTC MediaPad 10 FHD) USB Drivers for Huawei Android device.
Posted by အောင်မျိုး at 11:29 PM